Are there medicines to prevent my child getting COVID-19: Ndive ukuba kukho amanye amayeza kunye nezinto nezinto ezilungisa loo meko endingazinika umntwana wam ukubanqanda ukuba bangangenwa yi- COVID-19 - yinyaniso? – Messages for Mothers
Are there medicines to prevent my child getting COVID-19: Ndive ukuba kukho amanye amayeza kunye nezinto nezinto ezilungisa loo meko endingazinika umntwana wam ukubanqanda ukuba bangangenwa yi- COVID-19 – yinyaniso?
Zilumkele “iindaba ezingezizo”!!
Kukho iinkcukacha ezininzi ezibubuxoki nezingalunganga ezijikelezayo ngeli xesha.
Akukho zinto zikhethekileyo zokongeza unyango okanye iivithamini okanye amachiza okanye amayeza okunqanda i-COVID-19 ebantwaneni (okanye kubantu abadala)
Ukuze uhlale uphilile, yitya ukutya okusempilweni, (inqwaba yeziqhamo ezitsha kunye nemifuno), zilolonge mihla yonke, lala ngokwaneleyo yaye uzame ukungaxhalabi kakhulu.
← What can I do if my child does not like to wear a mask: Ndingenza ntoni ukuba umntwana wam akathandi kunxiba isifonyo? → What do I do if my child is sick and I’m not sure if it’s COVID-19: Ndingazi njani ukuba umntwana wam une- COVID-19? Yaye kufuneka ndenze ntoni?